Myeik - 19 Homes for Sale myeik - Cari Homes
Dagon Myothit (south) 2
We have 19 ads for keyword myeik
House for rent at No.(108), Seik Nge Quarter,Myeik, Tanintharyi Region
Bogyoke Road, Myeik City, Downtown Area. (1) Masterbedroom, (3) Bedroom, Fully Furnished. Ready to stay, including Rooftop. >Have Excellence City view point around these building, Most suitable ...
28 Nov 2020 - imyanmarhouse.com
For Sale one RC Building of three stories (Newest)
For Sale one RC Building of three stories (Newest) Area: Lenth = 43 Feet Wide = 20 Feet Height = 12 feet (ground floor) / 11.5 feet (first floor) / 11 feet (second floor) Owner Name had confirmed!! ...
For Sale one RC Building of three stories (Newest) Area: Lenth = 40 Feet Wide = 21 Feet Height = 12 feet (ground floor) / 11.5 feet (first floor) / 11 feet (second floor) Owner Name had confirmed!! ...
South Okkalapa, Yangon Region
Dagon Myothit (South), Yangon Region
Appartment to sell
Appartment to sell location: Blk 18　Room 202, Innwa Housing, Myeik Road, South Dagon　Township, Yangon Direction: Innwa housing, corner of Myeik road and Ayerwun road, south Dagon Nearby: City ...
မွိတျမွို့ <br /> ကမျးနားလမျးပျေါရှိ ၄၀-၆၀ မွကှေကျ<br /> ဂရမျးမွေ
You can pay within six months.
တနသာင်္ရီတိုင်း မြိတ်မြို့တွင် အိမ်နဲ့ ခြံ ရောင်းရန်ရှိသည်။
-လိပ်စာ မြိတ်မြို့ စန္ဒ၀တ်ရွာ၊ ကျွဲကူး မိန်းလမ်းမကြီး အပေါ် သဲအင်းဂူ ...
For sellahouse
ဘိုးဘွား ပိုင် အိမ် နှင့် မြေ ရောင်းရန် တနင်္သာရီတိုင်း/ မြိတ်မြို့ ...
ဘိုးဘွားပိုင် အိမ် နှင်မြေ ရောင်းရန် တနင်္သာရီတိုင်း/ မြိတ်မြို့/ ဘုရား ...
2 RCC for sale
Patauk street, Myo Thit.
မြိတ်မြို့ နယ် အရောင်းပါခင်ဗျာ
???? မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ???? (လူကြီးမင်းများ ရောင်းရန် ငှါးရန် ရှိသော တိုက်ခန်း ၊ ...
To sell Corner land area (0.13 acreas, 120ftx 50ft)
မြေကွက် (30ပေ x 50ပေ) ထောင့်ကွက်ဆက်တိုက်လေးကွက်ရောင်းရန် အကျယ်အဝန်း:... ...
ပေအကျယ် ၈၅ x ၂၂၅ ပေ တစ်ထပ်လုံးချင်း ထပ်ခိုးပါ ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင်ရောင်းလိုပါသည်
ပေအကျယ် ၈၅ x ၂၂၅ ပေ တစ်ထပ်လုံးချင်း ထပ်ခိုးပါ အိပ်ခန်း ၂ခန်း ရေချိုးခန်း ...
accountant job in myeik